तपाईँले पाँच वर्ष नुहाउनु भएन भने के हुन्छ ? « Salleri Khabar
तपाईँले पाँच वर्ष नुहाउनु भएन भने के हुन्छ ?
एजेन्सी । पाँच वर्षदेखि नुहाउन बन्द गरेका चिकित्सक डा. जेम्स हम्ब्लिन आफ्नो निर्णयबारे सोधिने प्रश्नको यसरी नै जवाफ दिन्छन्।
“तपाईँलाई बानी पर्दै जान्छ। सामान्य महसुस हुन्छ,” उनले बीबीसीसँग भने। ३७ वर्षका हम्ब्लिन येल विश्वविद्यालयको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक तथा निरोधात्मक उपचारबारे विशेषज्ञता भएका चिकित्सक हुन्।
उनी अमेरिकी म्यागेजिन द एट्लान्टिकमा पनि लेख्ने गर्छन्। सन् २०१६ मा त्यहाँ उनले एउटा लेख छपाएका थिए जसको शीर्षक ‘मैले नुहाउन छाडेँ तर पनि जीवन निरन्तर चल्यो’ रहेको थियो।
“हामीले आफ्नो जीवनको दुई वर्ष नुहाएर बिताउँछौ। त्यसमध्ये कति समय ( र पैसा अनि पानी) खेर गयो?” उनले लेखेका थिए।
सन् २०२० मा ३७ वर्षका हम्ब्लिनले आफ्नो अनुभवलाई आफ्नो पुस्तक “क्लीन: द न्यू साइन्स अफ स्कीन एन्ड ब्यूटी अफ डूइङ लेस” मा चर्चा गरेका छन्।
नुहाउन बन्द गर्ने उनको निर्णय एउटा प्रयोगका रूपमा सुरु भएको थियो। “मलाई के हुँदो रहेछ भन्ने जान्न मन लाग्यो। एकदमै कम नुहाउने धेरै मानिसहरूबारे मलाई जानकारी थियो। त्यसो गर्नु सम्भव पनि थियो तर म आफैँमा परीक्षण गरेर कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने हेर्न चाहन्थेँ।”
सन् २०१५ मा नुहाउन बन्द गरेपछि कस्तो प्रभाव पर्‍यो? “समय क्रममा तपाईँको शरीर अझ बढी अभ्यस्त हुँदै जान्छ त्यही भएर साबुन वा स्प्रेको प्रयोग नगर्दा पनि नराम्रो गन्ध आउन बन्द हुन्छ।”
“कैयौँ मानिसहरूले आफ्नो कपालबाट चिल्लो निखार्न स्याम्पूको प्रयोग गर्छन् र त्यसपछि कन्डिस्नर प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईँले त्यो क्रम रोक्नुभयो भने तपाईँको कपाल ती सामग्री लगाउनुभन्दा अघिको जस्तै देखिन्छ।”
हम्ब्लिनले सुरुमा कम साबुन र स्याम्पु प्रयोग गर्दै आफ्नो परीक्षण आरम्भ गरेका थिए। त्यसपछि उनले दैनिक नुहाउनको साटो हप्तामा तीन पटक नुहाउन थाले र त्यसपछि पूर्णरूपमा नुहाउन बन्द गरे। “कुनैकुनै बेला मलाई नुहाउने चाहना एकदमै उच्च हुन्थ्यो। गन्ध आउँथ्यो। तर त्यो बिस्तारै कम हुँदै गयो।”
यी अमेरिकी प्राज्ञ हाम्रो शरीरको गन्ध हाम्रो छालामा बस्ने र पसिना अनि हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्ने चिल्लो पदार्थमा निर्भर रहने ब्याक्टेरियाको कारण हुने बताउँछन्।
छाला र कपालमा दैनिक विभिन्न किसिमका उत्पादन प्रयोग गरेर छालाको चिल्लोपन र ब्याक्टेरियाबीचको सन्तुलन बिग्रने उनको तर्क छ।
सन् २०१६ मा एट्लान्टिकको लेखमा उनले ‘धेरै नुहाउँदा उक्त चक्र नष्ट हुने’ उल्लेख गरेका थिए। उनका अनुसार तुरुन्तै उत्पादन हुने भएकाले यो प्रवृत्तिले गन्ध दिने सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
तर नुहाउन बन्द गरेपछि एउटा नियामक प्रक्रिया अघि बढ्छ जसले पर्यावरणीय चक्रलाई स्थिर बनाउँछ र हामी नराम्रो गन्ध महसुस गर्न छाड्छौँ।
“तपाईँले वास्नादार पानी वा अत्तरको जस्तो गन्ध पनि पाउनुहुन्न। तपाईँले मानिसको जस्तो मात्रै गन्ध पाउनुहुन्छ।”
सन् २०२० को अगस्टमा दिएको अन्तरवार्तामा हेम्ब्लिनले आफूबाट नराम्रो गन्ध फैलिनसक्ने चिन्ता भए पनि मानिसहरूले शिष्ट देखिन त्यसलाई व्यक्त नगरेका हुन कि भन्ने चिन्ता छ कि छैन भनेर सोधिएको थियो।
त्यसको जवाफमा उनले त्यस्तो अवस्थामा नहिचकिचाउन आफूले साथीभाइ र चिनजान भएका व्यक्तिलाई भनेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैका आधारमा आफ्नो शरीरले हामीले थाहा पाएको नराम्रो गन्ध निकाल्न छाडेको निष्कर्षमा आफू पुगेको उनको दाबी छ।
हेम्ब्लिन भन्छन् उनको नयाँ गन्ध उनकी श्रीमतीलाई मन पर्छ र त्यो ‘नराम्रो’ नभएको अरू व्यक्तिले ठान्छन्।
के हेम्ब्लिनले नुहाउन पूरै छाडेका हुन्?
एकदमै प्रस्ट फोहर देखिएको अवस्थामा वा व्यायामपछि आफूले अझै पनि शरीर पुछ्ने उनी बताउँछन्। तर यी प्राज्ञ शरीरको चिल्लोपन हातले रगेडेर वा बेलाबेलामा कपाल कोरेर पनि हटाउन सकिने दाबी गर्छन्।
हेम्ब्लिनले आफ्नो पुस्तक लेख्न अनुसन्धान गर्ने क्रममा छाला रोग विशेषज्ञ, रोगप्रतिरोधी क्षमतासम्बन्धी विशेषज्ञ लगायतका विज्ञहरूसँग भेटेका थिए। सीमा काट्न एक क्यान्सरपीडितको हारगुहारः त्यसपछि के भयो?
उनको पुस्तकले त्वचा स्याहार उद्योगहरू प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको थियो।
व्यक्तिगत स्याहारका उत्पादन र साबुन बिक्री गर्ने उद्योगले एकै खालको समाधानमा मात्रै जोड दिने उल्लेख गर्दै उनी त्यसमध्ये केही सहयोग हुनसक्ने बताउँछन्। तर हाम्रो छालाको स्वास्थ्य हाम्रो जीवनशैली र हाम्रो शरीरमा के भइरहेको छ त्यसमा पनि निर्भर रहने उनको भनाइ छ।
छालामा धेरै क्रीम लगाउँदा त्यसको प्राकृतिक अवस्था फरक हुन सक्छ
के नुहाउने कुरालाई बढी महत्त्व दिइएको हो?
हेम्ब्लिन सरसफाइ भनेको के हो भन्नेबारे सबैको एउटै अवधारणा नहुन सक्ने विश्वास गर्छन्। उनको विचारमा नुहाउने बानीलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व दिइएको हुनसक्छ।
उनले भनेका छन्, “म यसलाई स्वास्थ्य आवश्यकताभन्दा पनि रोजाइका रूपमा लिन्छु।” तर हेम्ब्लिनले मानिसहरूलाई नुहाउन छाड्न सुझाव नदिने पनि उल्लेख गरे। यी चिकित्सक के गलत वा सही हो भन्नेबारे सुझाव दिन आफूलाई रुचि नरहेको उल्लेख गर्दै इच्छुक व्यक्तिहरूले क्रमैसँग आफूलाई राम्रो लाग्ने विन्दुसम्म पुग्नुपर्ने बताउँछन्। बिबिसी